Baptizim n'aha Jizọs - Njikọ nke iguzosi ike n'ezi ihe
Mbido Edemede Okwukwe Baptizim n'aha Jizọs
Baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie
Ihe ndabere Akwụkwọ Nsọ Maka Baptizim
Ntọala Akwụkwọ Nsọ maka Baptizim Mmiri n'Aha Jizọs
Jizọs bụ Onye Nlereanya maka Nzọpụta anyị
Gịnị mere e ji eme mmadụ baptizim n'aha Jizọs?
Gịnị ma ị na -eme baptism “n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ?”
Ihe Akaebe nke Eusebius
Okwu sitere na Eusebius (300-336 AD)
Ihe odide ala ala peeji nke Akwụkwọ Nsọ gbasara Matiu 28:19
Nkọwa ndị ọzọ gbasara Matiu 28:19 na Baptizim
Kedu maka Didache?
Okwu banyere Didache
Ozi nke Jọn na baptism nke Jisus
Iwu ahu na ndi-amuma di rue mb͕e Jọn: site na mb͕e ahu anēzisa ozi ọma nke ala-eze Chineke, onye ọ bula nējide kwa ike nime ya. ( Luk 16:16 ) Jọn kpọsara baptizim nke nchegharị maka mgbaghara mmehie. ( Luk 3:2-3 ) Ndị mmadụ jụrụ ma ọ̀ bụ Kraịst ahụ. ( Luk 3:15 ) Jọn kwuru na o ji mmiri mee baptizim, ma onye ahụ nke na-abịa n’azụ ya ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee baptizim. ( Luk 3:16 ) Mgbe Jọn mechara Jizọs baptizim ma kpee ekpere, mmụọ nsọ dakwasịrị n’isi ya. ( Luk 3:21-22 ) Mmụọ Jehova dị n’ahụ́ ya n’ihi na o tere ya mmanụ ikwusa ozi ọma. (Luk 4:18) Anyị ma ihe mere na Judia dum mgbe baptizim nke Jọn kwusara: otú Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ, o wee na-ejegharị na-eme ihe ọma na-agwọ ndị niile ekwensu na-emegbu; Chineke nọnyeere ya. ( Ọrụ 10:37-38 ) Ọ bụ onye Jọn hụrụ ka mmụọ nsọ ka ọ na-agbadata wee nọgide na-eji mmụọ nsọ eme baptizim. ( Jọn 1:33 ) Jizọs kwuru banyere ụmụazụ ya, sị: “N’ime baptizim e mere m, a ga-eme unu baptizim. (Mak 10:39)
Ozi nke baptism site na Jisos
Mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ime ime obodo Judia na-eme baptizim mgbe Jọn na-eme baptizim n’ihi na mmiri hiri nne n’ebe ahụ, ndị mmadụ na-abịakwa na-eme ha baptizim. ( Jọn 3:22-24 ) N’ikpeazụ, Jizọs nọ na-eme baptizim ma na-eme ọtụtụ ndị na-eso ụzọ karịa Jọn (ọ bụ ezie na Jizọs n’onwe ya emeghị baptizim, kama ọ bụ nanị ndị na-eso ụzọ ya). (Jọn 4:1-2) Jizọs kwuru, sị: “Mụ onwe m bụ ụzọ, na eziokwu, na ndụ, ọ dịghịkwa onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.” (Jọn 14:6) E dere Oziọma Jọn ka anyị wee kwere na Jizọs bụ Kraịst ahụ, Ọkpara Chineke, ka anyị wee nwee ndụ n’aha ya site n’ikwere. ( Jọn 20:31 ) Dị ka e dere na Kraịst ga-ata ahụhụ na n’ụbọchị nke atọ, e sikwa ná ndị nwụrụ anwụ bilie, otú a ka a ga-ekwusakwa nchegharị maka mgbaghara mmehie n’aha ya nye mba niile, malite na Jeruselem. ( Luk 24:46-47 ) Jizọs kwuru, sị: “E nyewo m ikike niile n’eluigwe na n’elu ụwa” ma “gaa mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m n’aha m.” (Matiu 28:18-19)
Ndụmọdụ Pita na Pentikọst
Mgbe a wụsasịrị onyinye nke Mmụọ Nsọ n’ụbọchị Pentikọst, Pita kwupụtara, “Ya mere, ka ụlọ Izrel nile mara nke ọma na Chineke emewo ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a unu kpọgidere n’obe. ( Utom 2:36 ) Mbon oro ẹkekopde oro ama enen̄ede okop esịt ẹnyụn̄ ẹbụp ẹte, “Nso ke ikpanam”? ( Ọrụ 2:37 ) Pita sịrị ha: “Chegharịanụ ka e meekwa unu niile baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, unu ga-anatakwa onyinye nke mmụọ nsọ. ( Ọrụ 2:38 ) O ji ọtụtụ okwu ndị ọzọ gbaa àmà ma nọgide na-agba ha ume, na-asị, “Zọpụtanụ onwe unu n’ọgbọ a gbagọrọ agbagọ.” ( Ọrụ 2:40 ) Ya mere e mere ndị natara okwu ya baptizim, a tụkwasịkwara ihe dị ka puku mkpụrụ obi atọ n’ụbọchị ahụ. ( Ọrụ 2:41 ) Ha tinyere onwe ha n’ozizi ndịozi na mkpakọrịta, n’inyawa achịcha na ekpere. ( Ọrụ 2:42 ) Jehova na-agbakwụnyekwa n’ọnụ ọgụgụ ha kwa ụbọchị ndị a na-azọpụta. (Ọrụ 2:47)
Baptizim nke ndị kwere ekwe na Sameria
Mgbe ndị nụrụ Filip na-ekwusa ozi ọma banyere alaeze Chineke na aha Jizọs Kraịst ma kwere, e mere ha baptizim, ma ndị ikom ma ndị inyom. ( Ọrụ 8:12 ) Ndịozi nọ na Jeruselem nụrụ na Sameria anatawo okwu Chineke ma zigaara ha Pita na Jọn, ( Ọrụ 8:14 ) Ndị gbadara kpee ekpere maka ha ka ha nweta mmụọ nsọ (Ọrụ 8). :15) Ebe ọ bụ na e mere ha baptizim naanị n’aha Onyenwe anyị Jizọs. ( Ọrụ 8:16 ) Mgbe ha bikwasịrị ha aka, ha natara mmụọ nsọ. (Ọrụ 8:17)
Pita nyere ndị Jentaịl baptizim n'aha Jizọs
Mgbe Pita kwusara ndị mba ọzọ ozi, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. ( Ọrụ 10:44 ) O juru ndị ahụ e biri úgwù anya n’ihi na a wụkwasịrị ndị Jentaịl onyinye nke Mmụọ Nsọ. ( Ọrụ 10:45 ) N’ihi na ha nọ na-anụ ka ha na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche iche ma na-eto Chineke. (Ọrụ 10:46) Pita kwuru, sị: “Ọ̀ dị onye ọ bụla pụrụ igbochi mmiri ime ndị a baptizim, bụ́ ndị natara Mmụọ Nsọ dị ka anyị nwetara?” ( Ọrụ 10:47 ) N’ihi ya, o nyere ha iwu ka e mee ha baptizim n’aha Jizọs Kraịst. (Ọrụ 10:48)
Nkwusa ozi ọma nke baptizim n'aha Jizọs
Mgbe Pọl kwusara ozi ọma n’Efesọs, ọ hụrụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya wee sị ha: “Ùnu natara Mmụọ Nsọ mgbe unu kweere?” ( Ọrụ 19:2 ) Mgbe ha zara na e mere ha baptizim n’ime baptizim Jọn, Pọl kwuru, sị: “Jọn ji baptizim nke nchegharị mee baptizim, na-agwa ndị mmadụ ka ha kwere n’Onye ahụ nke gaje ịbịa n’azụ ya, ya bụ, Jizọs.” ( Ọrụ 19:3-4 ) Mgbe ha nụrụ nke a, e mere ha baptizim n’aha Onyenwe anyị Jizọs. ( Ọrụ 19:5 ) Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka n’isi, mmụọ nsọ dakwasịrị ha, ha wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche na ibu amụma. (Ọrụ 19:6)
E liri anyị na Kraịst na baptism n'ime ọnwụ
Ndị kwere ekwe kwesịrị ichegharị ma mee baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie, na-atụ anya na ha ga-anata onyinye nke Mmụọ Nsọ. ( Ọrụ 2:38 ) E mere anyị niile bụ́ ndị e mere baptizim ịba n’ime Kraịst Jizọs baptizim baa n’ọnwụ ya. ( Ndị Rom 6:3 ) Ya mere, e liri anyị na ya site na baptizim baa n’ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si ná ndị nwụrụ anwụ site n’ebube nke Nna anyị, anyị onwe anyị kwa wee na-eje ije n’ime ndụ ọhụrụ. ( Ndị Rom 6:4 ) N’ihi na ọ bụrụ na e jikọtawo anyị na ya n’ọnwụ dị ka nke ya, a ga-ejikọta anyị na ya ná mbilite n’ọnwụ dị ka nke ya. ( Ndị Rom 6:5 ) Ọ bụ n’ime ya ka e ji ibi úgwù nke e mereghị anyị úgwù site n’iwepụ ahụ́ nke anụ ahụ́, site ná úgwù nke Kraịst. ( Ndị Kọlọsi 2:11 ) E liri anyị na ya ná baptizim, bụ́ nke e mere ka anyị na ya si n’ọnwụ bilie site n’okwukwe n’ọrụ dị ike nke Chineke, bụ́ onye mere ka o si ná ndị nwụrụ anwụ bilie. ( Ndị Kọlọsi 2:12 )
Nsogbu nke Baptizim n'aha Jizọs
A gaghi-eme ayi baptism n’aha ọzọ, dika Kraist nēkewaghi, ọ dighi kwa onye ọzọ akpọgidere n’obe n’ihi ayi. (1 Ndị Kọrint 1:13) A sachara anyị, edoro anyị nsọ, na-agụ anyị na ndị ezi omume n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na site n’ike mmụọ nsọ nke Chineke anyị. (1 Ndị Kọrint 6:11) E si na mmiri chọta nzọpụta nke Noa, baptizim, nke kwekọrọ na nke a, na-azọpụta anyị ugbu a, ọ bụghị dị ka iwepụ unyi n'anụ ahụ kama dị ka arịrịọ a rịọrọ Chineke maka ezi akọ na uche, site ná mbilite n'ọnwụ. nke Jisus Kraịst. (1 Pita 3:20-21) Ozizi mbụ nke Kraịst bụ ntọala nke nchegharị site n’ọrụ ndị nwụrụ anwụ na nke okwukwe n’ebe Chineke nọ na nke baptizim ozizi na nke ibikwasị aka n’isi. (Ndị Hibru 6:1-2 Lamsa) Ndị ahụ ridaraworo na baptism n’otu oge ma detụ onyinye ahụ nke sitere n’eluigwe ire ma nata Mmụọ Nsọ ma detụwo ezi okwu Chineke ọnụ na ike nke ụwa nke gaje ịbịa. – a na-atụ anya ka ọ nọgide na nchegharị. ( Ndị Hibru 6:4-6 Lamsa ) Chegharịa ma mee baptizim n’aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie gị. ( Ọrụ 2:38 ) Jizọs bụ nkume isi nkuku, nzọpụta adịghịkwa n’ebe onye ọ bụla ọzọ nọ, n’ihi na ọ dịghị aha ọzọ dị n’okpuru eluigwe nke e nyere n’etiti mmadụ nke a ga-eji zọpụta anyị. ( Ọrụ 4:11-12 ) Onye ọ bụla nke kwere, e meekwa ya baptizim, a ga-azọpụta ya, ma onye na-ekweghị ekwe, a ga-ama ya ikpe. (Mak 16:16)
Luk 16:16 (NLT)
“Iwu ahụ na Ndị Amụma dị ruo Jọn; kemgbe ahụ a na -ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, onye ọ bụla na -amanye ịbanye na ya.
(Gụọ Luk 3: 2-3.)
Okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekaraya n'ọzara. O we ba n'ógbè nile di Jọdan buruburu, ikwusa baptism nke nchegharị maka mgbaghara nmehie.
(Gụọ Luk 3: 15-16.)
Ka ndị mmadụ nọ na -atụ anya, mmadụ niile na -ajụkwa n'obi ha gbasara Jọn ma ọ nwere ike bụrụ Kraịst, Jọn zara ha niile, sị, “Ana m eme unu baptizim mmiri, mana onye ka m ike na -abịa, eriri akpụkpọ ụkwụ onye m na -erughị eru ịtọpụ ya. He ga -eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu baptizim.
(Gụọ Luk 3: 21-23.)
Ugbu a, mgbe e mere mmadụ niile baptizim, mgbe e mekwara Jizọs baptizim ma na -ekpe ekpere, eluigwe meghere, Mmụọ Nsọ wee dakwasị ya n'anụ ahụ, dị ka nduru; olu we si n'elu -igwe da, si, I bu Ọkparam M'huru n'anya; na gị enwere m obi ụtọ. Mgbe Jizọs malitere ozi ya, ọ dị ihe dị ka afọ iri atọ
(Gụọ Luk 4: 18-19.)
"Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ikwusara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ ịhụ ụzọ, ịtọhapụ ndị a na -emegbu emegbu, ikwusa afọ nke amara Onyenwe anyị. ”
(Mak 10: 37-40)
Ha wee sị ya, “Nye anyị ohere ka anyị nọdụ ala, otu n'aka nri gị, otu onye n'aka ekpe gị, n'ebube gị." Jizọs sịrị ha, “Unu amaghị ihe unu na -arịọ. Ị nwere ike ị drinkụ iko m na -a drinkụ, ma ọ bụ ka e mee gị baptizim nke a na -eme m baptizim? ” Ha we si ya, Ayi nwere ike. Jizọs wee sị ha: “Iko ahụ m na -a youụ ka unu ga -a drinkụ, na baptizim nke a na -eme m baptizim, a ga -eme unu baptizim, mana ịnọdụ ala n'aka nri m ma ọ bụ n'aka ekpe m abụghị nke m inye, kama ọ bụ bụ maka ndị a kwadebere maka ya. ”
Jọn 1: 25-27
Ha jụrụ ya sị, “Gịnịzi mere ị na -eme baptism, ọ bụrụ na ị meghị? Kraịst, ma ọ bụ Ịlaịja, ma ọ bụ onye amụma ahụ? ” Jọn zara ha, sị, “Eji m mmiri na -eme baptizim, mana otu onye guzoro n'etiti unu nke unu na -amaghị onye na -eso m, eriri onye m na -erughị eru ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. ”
Jọn 1: 29-34
N'echi ya, ọ hụrụ Jizọs ka ọ na -abịakwute ya, o wee sị, “Lee Nwa Atụrụ Chineke nke na -ewepụ mmehie nke ụwa! Onye a bu Onye mu onwem kwuru okwu bayere Ya, si, Otù Nwoke nābia n'azum Onye ghọworo Onye burum uzọ: n'ihi na Ọ buri Onye mbu n'ebe m'nọ. Mu onwe m amataghị ya, mana ka e mee ya ka ọ pụta ìhè nye Israel, ọ bụ maka nke a ka m ji mee mmadụ baptizim. Jọn wee gbaa ama: “Ahụrụ m mmụọ nsọ ka o si n'eluigwe rịdata dị ka nduru, ọ dịgidekwara n'isi ya. Mụ onwe m amataghị ya, mana onye zitere m ka m jiri mmiri mee baptizim sịrị m, 'Onye ọ bụla ị hụrụ ka Mmụọ Nsọ na -arịdata ma na -anọgidekwa na ya, onye a bụ onye ji mmụọ nsọ na -eme baptizim. ' Ahụwokwa m na -agba ama na onye a bụ Ọkpara Chineke. ”
Jọn 3: 22-24
Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs na ndị na -eso ụzọ ya banyere n'ime ime obodo Judia, ya na ha wee nọrọ na -eme baptism. Jọn n wasme kwa baptism n'Inon nke di Selem nso, n'ihi na mmiri juru eju n'ebe ahụ, ndị mmadụ na -abịakwa na baptism (n'ihi na akpobeghị Jọn n'ụlọ mkpọrọ).
Jọn 4: 1-2
Ugbu a, mgbe Jizọs matara na ndị Farisii nụrụ na Jizọs na -eme ya na -eme ndị na -eso ụzọ baptizim karịa Jọn (ọ bụ ezie na Jizọs n'onwe ya emeghị baptizim, kama ọ bụ naanị ndị na-eso ụzọ ya),
Jizọs sịrị ya:Abụ m ụzọ, na eziokwu, na ndụ. Ọ dịghị onye na -abịakwute Nna ma ọ́ bụghị site na mụ. "
“Ma e dere ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, na site na ikwere, ka unu nwee ndụ. n'aha ya. "
(Gụọ Luk 24: 46-47.)
“Otu a ka edekwara ya n'akwụkwọ nsọ, na Kraịst ga -ata ahụhụ wee si na ndị nwụrụ anwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, na ekwesịrị ịkpọsa nchegharị maka mgbaghara mmehie n'aha ya zigara mba nile, malite na Jerusalem.
Ọrụ 2: 36-42
Ya mere, ka ụlọ Izrel niile mara nke ọma na Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a nke unu kpọgburu. ” Ma mb whene ha nuru nka, o wutere ha, ha we si Pita na ndi -ozi fọduru, Umu -nna -ayi, gini ka ayi g ?me? Pita wee sị ha: “Chegharịanụ baptizim onye ọ bụla n'ime unu n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu, ma unu ga -anata onyinye nke Mụọ Nsọ. N'ihi na nkwa ahụ dịịrị gị na ụmụ gị na ndị niile nọ ebe dị anya, onye ọ bụla Onye -nwe Chineke anyị na -akpọ onwe ya. ” Na ọtụtụ okwu ndị ọzọ ọ gbara ama wee gaa n'ihu na -agba ha ume, na -asị, "zọpụta onwe unu n'ọgbọ a gbagọrọ agbagọ." Ya mere emere ndị natara okwu ya baptizim, a gbakwụnyekwara ihe dị ka mkpụrụ obi puku atọ n'ụbọchị ahụ. Ha we nārapu kwa n'ozizí ndi -ozi na nnwekọ, n'inyawa -achicha -ha na ekpere -ha.
Ọrụ 4: 11-12
Jizọs a bụ nkume nke unu, ndị na -ewu ụlọ, jụrụ, nke ghọrọ isi nkuku ụlọ. Nzọpụta adịghịkwa n'onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na ọ dị enweghị aha ọzọ N'okpuru eluigwe ka e nyere n'etiti mmadụ nke a ga -eji zọpụta anyị. ”
Ọrụ 8: 12-17
Ma mgbe ha kwenyere Filip ka ọ na -ekwusa ozi ọma banyere alaeze Chineke na aha Jizọs Kraịst, e mere ha baptism, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. Ọbụna Saịmọn n'onwe ya kwere, mgbe e mekwara ya baptizim, ọ gara n'ihu soro Filip. Ma mb wase ọ huru ihe -iriba -ama na ọlu -ebube di uku, ibobo nwuru Ya n'aru. Ugbu a, mgbe ndị ozi nọ na Jerusalem nụrụ na Sameria anatawo okwu Chineke, ha zigaara ha Pita na Jọn, ndị rịdatara wee kpere ha ekpere ka ha nata mmụọ nsọ, n'ihi na ọ gbabeghị onye ọ bụla n'ime ha, mana emere ha baptizim naanị n'aha Onyenwe anyị Jizọs. Mgbe ahụ ha bikwasịrị ha aka n'isi, ha wee nata Mmụọ Nsọ.
Ọrụ 10: 37-38
unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
Ọrụ 10: 44-48
Mgbe Pita ka na -ekwu ihe ndị a, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. Ibobo we nwua ndi kwere n'aru, ndi sitere n'ibì -úgwù, ndi soro Pita bia; N'ihi na ha nānu ka ha n speakingkwu okwu n'asusu di iche iche n andto kwa Chineke. Mgbe ahụ Pita kwuru, "Ọ nwere onye nwere ike igbochi mmiri ime ndị a baptizim, onye natara Mmụọ Nsọ dị ka anyị natara? ” O nyekwara iwu ka e mee ha baptizim n'aha Jizọs Kraịst...
Ọrụ 19: 2-7
O we si ha, younu natara Mọ Nsọ mb youe unu kwere? Ha wee sị, "Ee e, anyị anụbeghị na mmụọ nsọ dị." O we si, Gini kwa ka emere gi baptism? Ha sịrị, "N'ime baptizim Jọn." Na Paulo kae sɛ:Jọn jiri baptism nke nchegharị mee baptism, na -agwa ndị mmadụ ka ha kwere n'onye na -abịa n'azụ ya, ya bụ, Jizọs."Mgbe m nụrụ nke a, e mere ha baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs. Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka ya abụọ, Mmụọ Nsọ bịakwasịrị ha, ha wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche na ibu amụma. Ha dị ihe dị ka ndị ikom iri na abụọ.
Ndị Rom 6: 2-5
Olee otu anyị ndị nwụrụ nye mmehie ga -esi ebi n'ime ya? ị maghị na anyị niile nwere e mere ha baptizim n'ime Kraịst Jizọs, e mere ha baptizim n'ọnwụ ya? Ya mere, e liri anyị na ya site na baptism n'ime ọnwụ, ka, dị nnọọ ka emere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie site n'ebube nke Nna, ka anyị onwe anyị kwa wee na -ejegharị na ndụ ọhụrụ. N'ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị na ya n'ọnwụ dịka ya, anyị na ya ga -adị n'otu na mbilite n'ọnwụ dị ka nke ya.
Ndị Kọlọsi 2: 11-14
“N'ime ya kwa, e biiri unu úgwù site na ibi ugwu nke aka na -ejighị aka mee, site n'iwepụ anụ ahụ, site na ibi úgwù nke Kraịst, ebe e liri ya na baptism, nke esitere na ya kpọlite ​​unu na ya site na okwukwe na ọrụ dị ike nke Chineke, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ma gị onwe gị, ndị nwụrụ anwụ na njehie gị na ebìghị -úgwù nke anụ ahụ gị, Chineke mere ka gị na ya dị ndụ, ebe ọ gbaghaara anyị njehie anyị niile, site n'ịkagbu ndekọ nke ụgwọ nke guzogidere anyị na ihe iwu chọrọ. O wezuga nka, kpọgide ya n'obe. ”
1 Ndị Kọrịnt 1:13
"Ndi ekewara Kraist?? Ọ bụ Pọl kpọgburu maka unu? Ewoo emere unu baptizim n'aha Pọl?
1 Ndị Kọrịnt 6:11
“Ma a sachara gị, e doro gị nsọ, ị bụ onye ezi omume n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst sitekwa na Mmụọ nke Chineke anyị. ”
(1 Pita 3: 18-22)
"N'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ otu ugboro maka mmehie, onye ezi omume maka ndị ajọ omume, ka ọ kpọta anyị na Chineke, ebe a na -egbu ya n'anụ ahụ ma bụrụ onye e mere ka ọ dị ndụ na mmụọ, nke ọ gara kwusaara ndị mmụọ nọ n'ụlọ mkpọrọ, n'ihi na ha erubeghi isi na mbụ, mgbe ntachi obi Chineke chere n'ụbọchị Noa, mgbe a na -akwadebe ụgbọ ahụ, nke mmadụ ole na ole, ya bụ, mmadụ asatọ, e si na mmiri bute ha n'udo. Baptism, nke kwekọrọ na nke a, na -azọpụta gị ugbu a, ọ bụghị dị ka iwepụ unyi n'ahụ mmadụ kama dị ka ịrịọ Chineke maka ezi akọ na uche, site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst, onye gaworo n'eluigwe, nọkwa n'aka nri Chineke, ebe edobere ndị mmụọ ozi, ndị isi, na ike n'okpuru ya.
Ndị Hibru 6: 1-8 (Peshitta Aramaic, Lamsa)
1 Ya mere, ka anyị hapụ okwu mbụ nke Kraịst, ma ka anyị gaa n’iru ruo izu-oke. Gịnị kpatara na ị na-atọkwa ntọala ọzọ maka nchegharị site n'omume gara aga na maka okwukwe na Chineke? 2 Na maka ozizi nke baptizim na maka ibikwasị aka na n’ihi mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na maka ikpe ebighi-ebi? 3 Ọ bụrụ na Onye-nwe ga-ekwe, nke a ka anyị ga-eme. 4 Ma nke a bụ ihe na-agaghị ekwe omume nye ndị ahụ e meworo baptism otu mgbe 5 ma detụworo onyinye ahụ sitere n’elu-igwe ire ma nata Mụọ Nsọ, ma detụworo ezi okwu nke Chineke na ike nile nke ụwa nke na-abịa ire, 6 N’ihi na, n’ihi ha. ime mmehie ọzọ na ka e mee ka ọ dị ọhụrụ site na nchegharị, ha kpọgidere Ọkpara Chineke n’obe nke ugboro abụọ ma mee ka ihere meghee ya. 7 N’ihi na ala nke na-aṅụ mmiri ozuzo nke na-adakwasị ya nke ukwuu, ma na-amịpụta ahịhịa ndụ bara uru nye ndị a na-akọ ya, na-anata ngọzi sitere n’aka Chineke; 8 Ma ọbụrụ na ọ ga-amịpụta ogwu na ùgà a jụrụ ya ma ọ dịghị anya ka a mara ya ikpe; ma n'ikpeazụ a ga-akpọ ihe ọkụkụ a ọkụ.
A ga -azọpụta onye ọ bụla nke kwere wee mee ya baptizim, ma a ga -ama onye ọ bụla na -ekweghị ikpe
Jizọs n'asụsụ ndị mbụ
Hibru: Yeshua, Y'suah ma ọ bụ Yehoshua (ישוע ma ọ bụ יְהוֹשֻׁעַ)
Aramaic: Yeshuʿ ma ọ bụ Yisho (ܝܫܘܥ)
Grik: Iēsous (Ἰησοῦς)
Ihe aha Jizọs pụtara
Enweela atụmatụ dị iche iche gbasara ihe aha Yəhôšuaʿ (Joshua, Hibru: יְהוֹשֻׁעַ) pụtara, gụnyere Yahweh/Jehova na-azọpụta, (bụ) nzọpụta, (bụ) mkpu ịchekwa, (bụ) mkpu -chekwa, (bụ) mkpu enyemaka, (bụ) enyemaka m.
Aha Grik Azịza sitere na Hibru/Aramaic na pụtara “onye na -agwọ ọrịa ma ọ bụ dibịa, na onye nzọpụta.”
Ọdịiche nke aha Jizọs na Bekee
John Wycliffe (1380s) jiri nsụpe Ihesus ma werekwa Ihesu. Tyndale na narị afọ nke 16 nwere Iesu mgbe ụfọdụ. 1611 King James Version na -eji Iesus eme ihe oge niile, agbanyeghị nhazi ya. 'J' bụbu otu 'I'. E leghị 'J' na 'm' anya dị ka akwụkwọ ozi dị iche ruo mgbe 1629 Cambridge 1st Revision King James Bible ebe “Jesus” 1st pụtara. A bịara jiri Jesu na Bekee, ọkachasị n'abụ.
A na-eji Jesu (/ ˈdʒiːzuː/ JEE-zoo; sitere na Latin Iesu) dị ka olu Jizọs na Bekee.
Jizọs nwụrụ, lie ya, e meekwa ka o si n'ọnwụ bilie (1 Ndị Kọrịnt 15: 1-4)
Nchegharị bụ ihe atụ nke ọnwụ
Baptizim ime mmiri bụ ihe atụ nke olili ozu
Ịnata Mmụọ Nsọ bụ ihe atụ nke ibilite n'ọnwụ (ịmụ ọzọ)
Anyị ga -anwụ ma lie anyị na Kraịst ka anyị wee nwee ike na -eje ije na ndụ ọhụrụ. (Ndị Rom 6: 2-4)
Anyị na -anwụ ka anyị mee mmehie / chegharịa (Ndị Rom 6: 2)
E liri anyị na Kraịst na baptism (Ndị Rom 6: 2-4, Kọl 2: 11-14)
A mụrụ anyị ọzọ site na ịnweta Mmụọ Nsọ na -akwado olileanya anyị na mbilite n'ọnwụ (Ndị Rom 6: 4)
Anyị kwenyere na ọ bụrụ na anyị anwụọ, e lie anyị na Kraịst, a ga -akpọlitekwa anyị na Kraịst
Jizọs bụ Kraịst (Mesaya), Ọkpara Chineke (Luk 4:41, Jọn 4: 25-26, Jọn 20:31)
Site na Jizọs anyị na-anata nkuchi dị ka ụmụ Chineke (Ndị Rom 8:29, Gal 4: 4-5, Ef 1: 5, Hib 2: 8-13)
Jizọs bụ naanị aha e nyere n'etiti mmadụ nke a ga -eji zọpụta anyị. (Jọn 4: 11-12, Jọn 4:16, Ọrụ 4: 11-12, Ọrụ 10: 42-43)
Nna ahụ hụrụ Jizọs n'anya ma nyefee ihe niile n'aka ya (Jọn 3:35, Jọn 13: 3, Jọn 17: 2, Mat 28:18, 1Kọ 15:27)
Jizọs bụ otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ (1Tim 2: 5-6, Hib 8: 6, Hib 9:15, Hib 12:24)
Jizọs bụ onye ozi anyị na onye isi nchụàjà nke nkwupụta anyị (Ndị Hibru 2:17, Hib 3: 1-6, Hib 4: 14-15, Hib 5: 5-6, Hib 7:26, Hib 8: 1-2, Hib. 9:24, Hib 10: 19-21)
Chineke buliri Jizọs elu karịa aha niile (Phil 2: 8-11, Eph 1: 20-22, Ọrụ 2:36, Ọrụ 5: 30-31, 1Cor 8: 5-6, Rom 10: 9-13)
Chineke ahọpụtala Jizọs ka ọ bụrụ onye ikpe ụwa (Ọrụ 10:42, Ọrụ 17: 30-31, 2 Ndị Kọrịnt 5:10)
Jizọs bụ atụmatụ zoro ezo ruo ọtụtụ afọ n'ime Chineke ime ka ihe niile dịrị n'otu (Eph 1: 3-11, Eph 3: 9-11, 1Thes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)
Enwere ọtụtụ ihe gbara ọkpụrụkpụ mere e ji eme mmadụ baptizim n'aha Jizọs, dị ka edepụtara na ngalaba ndị a dị n'elu
Ime baptizim n'ụdị nke atọ n'ime otu na -efunahụ ihe atụ nke ịnwụ na iso Kraịst lie ya
Jizọs bụ aha nke anyị nwere ike nweta na Nna wee nata Mmụọ Nsọ
N'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, nke na -akọ banyere uto nke ụka mbụ, ndị ozi kwusara naanị aha baptizim na ime baptizim n'aha Jizọs
Ndị Kraịst mbụ n'ime narị afọ nke 1 na mmalite narị afọ nke abụọ mere baptizim n'aha Jizọs
Ndị nna ụka oge gboo na -egosi na a nabatara baptizim aha Jizọs (dị ka ihe ọzọ na usoro nke Atọ n'Ime Otu nke Matt 28:19)
Ọmụmụ ihe ọgbara ọhụrụ na -ekwu na usoro atọ n'ime otu nke Matt 28:19 abụghị nke mbụ na Matiu mana agbakwunyere ya mgbe emechara
Eusebius Pamphili, ma ọ bụ Eusebius nke Sesaria mụrụ na 270 AD wee nwụọ n'ihe dị ka 340 AD
Eusebius, onye ịnụ ọkụ n'obi anyị ji ọtụtụ n'ime ihe a maara akụkọ ihe mere eme nke Agba Ọhụrụ "(Dr. Westcott, General Survey of the History of the Canon of the New Testament, peji nke 108).
“Eusebius, onye nkuzi Gris kacha ukwuu na Chọọchị na onye ọkà mmụta okpukpe kacha mara nke oge ya… rụrụ ọrụ na -agwụ ike maka ịnakwere okwu dị ọcha nke Agba Ọhụrụ ka o si n'aka ndị ozi. Eusebius… dabere naanị n'ihe odide ochie "(EK na Christadelphian Monatshefte, Ọgọst 1923; Onyeọbịa Fraternal, June 1924)
"Eusebius Pamphilius, Bishọp nke Sesaria na Palestine, nwoke nwere ọgụgụ isi na ọgụgụ isi, na onye nwetara ọrụ ya na akụkọ ihe mere eme nke ụka, na ngalaba mmụta mmụta okpukpe ndị ọzọ."… Pamphilius, nwoke mmụta na onye na -anụ ọkụ n'obi nke Sesaria, na onye guzobere ọbá akwụkwọ sara mbara ebe ahụ, nke Eusebius si na ya nweta nnukwu mmụta ya. ” (JL Mosheim, nkọwa ala ala peeji).
N'ọbá akwụkwọ ya, ọ ga -abụrịrị na Eusebius na -ejikwa codex nke Oziọma ndị ahụ ihe dị ka narị afọ abụọ karịa nke mbụ n'ime nnukwu òtù ndị anyị nwere ugbu a n'ọbá akwụkwọ anyị ” (Akwụkwọ akụkọ Hibbert, Ọktoba, 1902)
Eusebius ji anya ya hụ akwụkwọ Matiu a na -agbanweghị agbanwe nke nwere ike bụrụ nke izizi dị nso na Matiu mbụ.
Eusebius hotara akwụkwọ mbụ nke Matiu nke o nwere n'ọbá akwụkwọ ya dị na Sesaria. Eusebius na -agwa anyị ezi okwu Jizọs gwara ndị na -eso ụzọ ya na ederede mbụ nke Matiu 28:19: “O ji otu okwu na olu gwa ndị na -eso ụzọ ya:“ Gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na -eso ụzọ m, na -ezi ha ka ha debe. ihe niile m nyere gị n'iwu.
MSS nke Eusebius ketara n'aka onye bu ya ụzọ, Pamphilus, na Caesarea na Palestine, ụfọdụ opekata mpe chekwara ọgụgụ mbụ, nke a na -e kwughị maka Baptizim ma ọ bụ Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ. ” O doro anya na nke a bụ ederede nke Eusebius chọtara na codex oge ochie anakọtara afọ iri ise ruo otu narị na iri ise tupu amụọ ya site n'aka ndị buru ya ụzọ (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)
Ihe akaebe nke ozioma (ihe ngosi Evangelica)
Akwụkwọ III, Isi nke 7, 136 (mgbasa ozi), p. 157
"Mana ebe ndị na -eso ụzọ Jizọs nwere ike na -ekwu otu a, ma ọ bụ na -eche otu a, nna ukwu ahụ doziri nsogbu ha, site na itinye otu ahịrịokwu, na -ekwu na ha kwesịrị imeri" n'aha m. ” Na ike nke aha Ya dị ukwuu nke ukwuu, nke na onyeozi ahụ kwuru, sị: “Chineke enyewo ya aha nke dị elu karịa aha ọ bụla, na n'aha Jisos ikpere ọ bụla ga -ehulata, nke ihe dị n'eluigwe, na ihe ndị dị n'ụwa, na ihe ndị dị n'okpuru ụwa, "O gosipụtara omume ọma nke ike n'aha ya nke zoro ezo n'etiti igwe mmadụ mgbe ọ gwara ndị na -eso ụzọ ya:Gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na -eso ụzọ m n'aha m. ” Ọ na -ebukwa amụma nke ọma ihe ga -eme n'ọdịnihu mgbe Ọ sịrị: "A ga -ebu ụzọ kwusaa ozi ọma a nye ụwa niile, ka ọ bụrụ àmà nye mba niile."
Akwụkwọ III, Isi nke 6, 132 (a), p. 152
O ji otu okwu na olu gwa ndị na -eso ụzọ ya:Gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na -eso ụzọ m n'aha mNa -ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu, ”…
Akwụkwọ III, Isi 7, 138 (c), p. 159
A manyere m ịlaghachi azụ nzọ ụkwụ m, na ịchọ ihe kpatara ha, na ikwupụta na ha gaara enwe ike ịga nke ọma n'atụghị egwu ha, site n'ike dị ike karịa Chineke, na ike karịa mmadụ na site na nkwado nke Onye kwuru. nye ha; “Mee mba niile ka ha bụrụ ndị na -eso ụzọ m n'aha m. "
Akwụkwọ nke IX, Isi 11, 445 (c), p. 175
Ọ na -akpọkwa ndị na -eso ụzọ ya mgbe a jụrụ ha, "Gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na -eso ụzọ m n'aha m. "
Akwụkwọ nke Atọ, isi nke ise
“...Ma ndị-ozi fọduru, ndị e kpara nkata imegide ha n’esepụghị aka n’ihi mbibi ha, ma a chụpụworo ha n’ala Judia, gakwuuru mba nile ikwusa Oziọma ahụ, na-adabere n’ike nke Kraist, Onye siri ha, Jenu, me mba nile ka ha buru ndi nēso uzọ Jisus n'aham"
Akwụkwọ Nsọ Jerusalem, 1966
Ọ nwere ike bụrụ na usoro a, ruo n'ozuzu nke okwu ya, bụ ngosipụta nke iji akwụkwọ nsọ etinyere mgbe emechara n'ime obodo oge gboo. A ga -echeta na Ọrụ Ndịozi kwuru maka ime baptizim “n'aha Jizọs.”
Ụdị ọkọlọtọ ọhụrụ edegharịrị
Ndị nkatọ ọgbara ọhụrụ na -azọrọ usoro a ka ekwuru na ọ bụ Jizọs na ọ na -anọchite anya ọdịnala ụka (Katọlik), n'ihi na ọ nweghị ebe n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi (ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ nke Akwụkwọ Nsọ) a na -eji aha Atọ n'Ime Otu mee baptism ...
Nsụgharị Agba Ọhụrụ nke James Moffett
Ọ nwere ike bụrụ na usoro (Atọ n'Ime Otu) a, ruo n'otú okwu ya si jupụta, bụ ngosipụta nke akwụkwọ nsọ (Katọlik) E hiwere ya na obodo ochie (Katọlik), a ga -echeta na Ọrụ Ndịozi na -ekwu maka ime baptizim “n'aha Jizọs.”
The International Standard Bible Encyclopedia, mpịakọta. 4, ibe 2637
“Matiu 28:19 ọkachasị na -enye iwu ọnọdụ nke ụka mgbe e mesịrị, na ijikọ ụwa ọnụ ya megidere eziokwu nke akụkọ ntolite nke Ndị Kraịst oge mbụ, na usoro Atọ n'Ime Otu ya (bụ) ihe ọhụrụ n'ọnụ Jizọs. "
The Tyndale New Testament Commentaries, I, peji nke 275
“A na -ekwenyekarị na okwu ndị dị n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ abụghị ipsissima verba [kpọmkwem okwu] nke Jizọs, kama…a mgbe e mesịrị liturgical mgbakwunye. "
A Dictionary of Christ and the Gospel, J. Hastings, 1906, peji nke 170
A na -enwe obi abụọ ma iwu doro anya nke Mat. Enwere ike ịnabata 28:19 dị ka Jizọs kwuru. … Mana usoro Atọ n'Ime Otu dị n'ọnụ Jizọs bụ n'ezie ihe a na -atụghị anya ya.
Britannica Encyclopedia, Mbipụta nke 11, Mpịakọta nke 3, peeji nke 365
"A gbanwere baptizim site n'aha Jizọs ka ọ bụrụ okwu Nna, Ọkpara & Mmụọ Nsọ na narị afọ nke abụọ. "
Akwụkwọ ọkọwa okwu nke Anchor, Vol. 1, 1992, peeji nke 585
"A naghị edozi ilu ahụ na Matiu 28:19, ebe ọ bụ na dị ka ọtụtụ ndị ọkà mmụta kwenyere, ọ bụghị ezigbo okwu Jizọs"
The Interpreters Dictionary of the Bible, 1962, peji nke 351
Matiu 28:19 “… a na -arụrịta ụka n'ihe ederede, mana n'echiche nke ọtụtụ ndị ọkà mmụta, a ka nwere ike were okwu ndị ahụ dị ka akụkụ nke ezigbo ederede Matiu. Agbanyeghị, enwere nnukwu obi abụọ ma gị nwere ike ịbụ ipsissima verba nke Jizọs. Ihe akaebe nke Ọrụ 2:38; 10:48 (Ihe 8:16; 19: 5), nke Gal. 3:27; Ndị Rom 6: 3, na -atụ aro na baptizim na mmalite Iso Ụzọ Kraịst, ọ bụghị n'aha atọ, kama "n'aha Jizọs Kraịst" ma ọ bụ "n'aha Onyenwe anyị Jizọs.. ” Nke a siri ike ijikọ na ntuziaka akọwapụtara nke amaokwu na njedebe nke Matiu. ”
The Dictionary of the Bible, 1947, peji nke 83
“Ọ bụla omenala ịtụle usoro omume (ime baptizim) n'okwu Kraịst edere na Matiu 28:19. Mana agbaghaghị izi ezi nke amaokwu a n'akụkọ ihe mere eme yana n'ihe ederede. Ekwesịrị ikweta na usoro nke aha nwere okpukpu atọ, nke edepụtara ebe a, egosighị na Chọọchị oge gboo were ya n'ọrụ"
History of New Testament Criticism, Conybeare, 1910, peji, 98-102, 111-112
"Ya mere, o doro anya na nke MSS nke Eusebius ketara n'aka onye bu ya ụzọ, Pamphilus, na Sesaria na Palestine, ụfọdụ opekata mpe chekwara ọgụgụ mbụ, nke a na -e kwughị maka Baptizim ma ọ bụ Nna, Ọkpara, na Nsọ. Mmụọ. ”
International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testament; S. Ọkwọ ụgbọ ala, A. Plummer, C. Briggs; A Critical & Exegetical Commentary of St. Matthew Third Edition, 1912, peeji nke 307-308
“Eusebius na -ehotakarị n'ụdị nkenke a nke na ọ dị mfe iche na ọ na -ehota okwu nke Oziọma, karịa imepụta ihe kpatara nke nwere ike butere ya ọtụtụ oge ịkọwa ya. Ma ọ bụrụ na anyị na -eche otu ụdị mkpụmkpụ ya ka ọ dị ugbu a na MSS. nke Oziọma ahụ, enwere ọtụtụ ihe na -eche na ọ bụ ederede mbụ nke Oziọma, na na narị afọ ndị sochirinụ nkebi ahịrịokwu "ime baptizim ... Mmụọ" nọchiri nkenke "n'aha m". Na ntinye nke ụdị a sitere n'iji akwụkwọ nsọ ga -anabata ndị odee akwụkwọ na ndị ntụgharị ngwa ngwa. "
Hastings Dictionary of the Bible 1963, peeji nke 1015:
“Isi ihe odide Atọ n'Ime Otu dị na NT bụ usoro baptizim na Mt 28: 19… Okwu mbubreyo mbilite n'ọnwụ a, nke a na-ahụghị na Oziọma ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ na NT, ka ụfọdụ ndị ọkà mmụta lere anya dị ka ntinye n'ime Matiu. Emekwara ka ọ pụta ìhè na echiche nke ime ndị na -eso ụzọ ka na -aga n'ihu na -akụziri ha ihe, nke mere na ntinye aka na -ekwu maka baptizim na usoro Atọ n'Ime Otu ya bụ ikekwe ntinye nke okwu ahụ ọzọ. N'ikpeazụ, ụdị Eusebius nke ederede (oge ochie) (“n'aha m” karịa n'aha Atọ n'Ime Otu) enwewo ụfọdụ ndị na -akwado ya. Ọ bụ ezie na a na-ahụ usoro Atọ n'Ime Otu ugbu a n'akwụkwọ Matiu nke oge a, nke a anaghị ekwe nkwa na ọ sitere na nkuzi akụkọ ihe mere eme nke Jizọs. O doro anya na ọ ka mma ilele usoro (Atọ n'Ime Otu) dị ka enwetara site na Onye Kraịst oge mbụ (Katọlik), ikekwe onye Siria ma ọ bụ Palestine, iji baptizim (cf Didache 7: 1-4), yana nchịkọta nkenke nkuzi Chọọchị (Katọlik) banyere. Chineke, Kraịst, na Mmụọ… ”
Nkọwa Okwu nke Akwụkwọ Nsọ, Mpịakọta 33B, Matiu 14-28; Donald A. Hagner, 1975, peji 887-888
“Aha nke nwere okpukpu atọ (ọkachasị bụ ozizi Atọ n'Ime Otu) nke a ga -eme baptizim, n'aka nke ọzọ, yiri ka ọ bụ mmụba dị omimi nke mgbochiume onye nkwusa ozioma na omume nke oge ya (otu a Hubbard; cf. mere 7.1). Enwere ezigbo ohere na n'ụdị mbụ ya, dị ka ụdị ante-Nicene Eusebian gbara, ederede na-agụ “mee ndị na-eso ụzọ n'aha m” (lee Conybeare). Ọgụgụ a dị mkpụmkpụ na -echekwa ụda nke akụkụ ahụ, ebe usoro triadic na -adaba n'ụzọ adịghị mma na nhazi ahụ dịka mmadụ nwere ike ịtụ anya ma ọ bụrụ na ọ bụ njikọta…. ịdị mkpa nke “aha Jizọs” na nkwusa Ndị Kraịst oge mbụ, ime baptizim n'aha Jizọs, na otu "n'aha ya" na -ekwu maka olile anya nke ndị mba ọzọ na Aịsa. 42: 4b, nke Matiu hotara na 12: 18-21. Dị ka Carson si kwuo n'ụzọ ziri ezi banyere amaokwu anyị: “Ọ nweghị ihe akaebe anyị nwere ipsissima verba Jizọs ebe a” (598). Nkọwa nke Ọrụ Ndị Ozi na -ekwupụta iji aha naanị “Jizọs Kraịst” mee baptizim (Ọrụ 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; Rom 6: 3; Gal 3:27) ma ọ bụ naanị “Onyenwe anyị Jizọs” (Ọrụ 8: 16; 19: 5)
The Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, peji nke 435
“Otú ọ dị, Jizọs enweghị ike inye ndị na -eso ụzọ ya usoro baptism nke Atọ n'Ime Otu mgbe mbilite n'ọnwụ ya gasịrị; n'ihi na Agba Ọhụrụ maara naanị otu baptizim n'aha Jizọs (Ọrụ 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Rom 6: 3; 1 Kọr 1: 13- 15), nke ka na -eme ọbụna na narị afọ nke abụọ na nke atọ, ebe usoro Atọ n'Ime Otu pụtara naanị na Mat. 28:19, na naanị ọzọ (na) Didache 7: 1 na Justin, Apol. 1: 61… N'ikpeazụ, agwa dị iche iche nke usoro iwu… obughi uzo Jisos ime usoro di otua… ezigbo izi ezi nke Mat. 28:19 ga -agbagha… ”.
Akwụkwọ bụ Encyclopedia of Religion and Ethics
Banyere Matiu 28:19, ọ na -ekwu: Ọ bụ isi ihe akaebe maka echiche ọdịnala (Atọ n'Ime Otu). Ọ bụrụ na enweghị mgbagha, nke a ga -abụrịrị mkpebi siri ike, mana ntụkwasị obi ya na -agbagha n'ihi nkatọ ederede, nkatọ akwụkwọ na nkatọ akụkọ ihe mere eme. Otu akwụkwọ nkà ihe ọmụma ahụ gara n'ihu na -ekwu, sị: “Nkọwa doro anya nke ịgbachi nkịtị nke Agba Ọhụrụ n'aha atọ n'ime otu, yana iji usoro ọzọ (Aha Jizọs) n'Ọrụ Ndịozi na Pọl, bụ na usoro nke ọzọ a bụ nke mbụ, na atọ atọ usoro bụ mgbakwunye ọzọ. ”
The Jerusalem Bible, Ọrụ Ọkachamara Katọlik
“Ọ nwere ike bụrụ na usoro a, (Triune Matthew 28:19) ruo n'ozuzu nke okwu ya, bụ ngosipụta nke usoro ịgba akwụkwọ (mmadụ mere) guzobere na mgbe ochie (obodo Katọlik). A ga -echeta na Ọrụ Ndịozi na -ekwu maka ime baptizim "n'aha Jizọs," ...
The International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, peji nke 398
"Feine (PER3, XIX, 396 f) na Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Na-arụ ụka na usoro Atọ n'Ime Otu dị na Matiu 28:19 bụ ụgha. Enweghị ndekọ ọ bụla nke iji usoro Atọ n'Ime Otu nwere ike ịchọta n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi. ma ọ bụ akwụkwọ ozi ndị ozi ”.
Nkà ihe ọmụma nke ndị nna ụka, Mpịakọta. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, peji nke 143
Nkuzi mmụta dị oke mkpa, n'ozuzu ya, na -ajụ njirimara ọdịnala nke usoro baptizim nke atọ nke atọ wee were ya dịka nke sitere na mgbe e mesịrị. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na usoro baptism ahụ nwere otu akụkụ, ọ wee jiri nwayọ wepụta n'ụdị atọ ya.
GR Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, peeji nke 83
“E nyewo m ikike niile n'eluigwe na n'elu ụwa” na -eduga anyị ịtụ anya n'ihi nke a, “Gaanụ mee m ndị na -eso ụzọ m n'etiti mba niile, na -eme ha baptizim n'aha m, na -ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu. ” N'ezie, ahịrịokwu nke mbụ na nke atọ nwere ihe ọ pụtara: ọ dị ka a gbanwetụrụ ahịrịokwu nke abụọ site na Christological ka ọ bụrụ usoro Atọ n'Ime Otu maka ọdịmma nke akwụkwọ nsọ ”.
The Catholic Encyclopedia, II, 1913, Baptizim
Ndị ode akwụkwọ ahụ kwetara na enwela arụmụka gbasara ajụjụ gbasara ma baptizim n'aha Kraist ka ọ dị mgbe ọ dị ire. Ha na -ekweta na amaokwu ndị dị n'Agba Ọhụrụ na -ebute nsogbu a. Ha na -ekwupụta '' Iwu doro anya nke Onye isi ndị ozi: "Ka emee onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst, maka mgbaghara mmehie unu (Ọrụ, ii)." … N'ihi akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a ụfọdụ ndị ọkà mmụta okpukpe ekwuola na ndịozi mere baptizim n'aha Kraịst naanị. A na -akpọ St. Thomas, St. Bonaventure, na Albertus Magnus ka ndị ọchịchị maka echiche a, ha na -ekwupụta na ndị ozi mere nke a site n'ọgbọ pụrụiche. Ndị edemede ndị ọzọ, dị ka Peter Lombard na Hugh nke St. Victor, na -ekwenyekwa na baptism dị otú ahụ ga -adị mma, mana ekwughị ihe ọ bụla gbasara oge ndị ozi. ”
Ha gara n'ihu na -ekwu, "E boro ebubo ikike Stephen Pope nke Mbụ maka izi ezi nke baptizim enyere n'aha Kraịst naanị. Cyprian kwuru (Ep. Ad Jubaian.) Na onye ụkọchukwu a kwupụtara na baptizim niile dị ma ọ bụrụhaala na enyere ya n'aha Jizọs Kraịst… , VIII), ebe ọ na -ekwu na a gaghị eme mmadụ baptizim nke emerela baptizim “n'aha nke Atọ n'Ime Otu Dị Nsọ ma ọ bụ n'aha Kraịst naanị, dịka anyị gụrụ n'Ọrụ Ndịozi."
Joseph Ratzinger (pope Benedict XVI) Okwu mmalite nke Iso Ụzọ Kraịst: mbipụta 1968, p. 82, 83
“Ụdị okwukwe anyị bụ nke malitere n'oge narị afọ nke abụọ na nke atọ n'ihe metụtara ime baptizim. Banyere ebe o si malite, ederede (Matiu 28:19) sitere n'obodo Rome. ”
Wilhelm Bousset, Kyrios Christianity, peji nke 295
“Akaebe maka nkesa sara mbara nke usoro baptizim dị mfe [n’aha Jizọs] ruo narị afọ nke abụọ karịrị akarị nke na ọbụna na Matiu 28:19, e mechara tinye usoro Atọ n’Ime Otu.”
Maka Kraịst, Tom Harpur, peji nke 103
“Ndị niile ma e wezụga ndị ọkà mmụta na -achọghị mgbanwe na -ekwenye na opekata mpe etinyere akụkụ ikpeazụ nke iwu a [akụkụ atọ nke Matiu 28:19]. Usoro [Atọ n'Ime Otu] adịghị ebe ọ bụla ọzọ na Agba Ọhụrụ, anyị makwaara site na naanị ihe akaebe dịnụ [nke Agba Ọhụrụ] na Chọọchị mbụ ejighị okwu ndị a mee ndị mmadụ baptizim ("n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ ”) baptism bụ“ n’ime ”ma ọ bụ“ n’ime ”aha Jizọs naanị. Ya mere, a na -arụ ụka na amaokwu ahụ gụrụ na mbụ "mee ha baptizim n'aha m" wee gbasaa [gbanwee] ka ọ rụọ ọrụ na nkwenkwe [Katọlik Atọ n'Ime Otu nke Katọlik mechara bụrụ]. N'ezie, echiche izizi nke ndị ọkà mmụta nkatọ German tinyere ndị Unitarians na narị afọ nke iri na itoolu, bụ nke ekwuru dị ka ọkwa nnabata nke isi mmụta ogologo oge gara aga dị ka 1919, mgbe mbụ e bipụtara nkọwa Peake: “Churchka nke mbụ ụbọchị (AD 33) edebeghị iwu ụwa a (Atọ n'Ime Otu), ọ bụrụgodi na ha maara ya. Iwu ahụ nke ime baptizim n'aha [Atọ n'Ime Otu] bụ ịgbasa ozizi n'oge. ”
A History of The Christian Church, Williston Walker, 1953, peji 63, 95
“Site na ndị na -eso ụzọ mbụ, baptism bụ" n'aha Jizọs Kraịst. " Enweghị aha maka baptizim n'aha nke Atọ n'Ime Otu n'ime Agba Ọhụrụ, belụsọ n'iwu e nyere Kraịst na Matiu 28:19. Ederede ahụ bụ mbido, (mana ọbụghị nke mbụ) agbanyeghị. Ọ dabere n'ụkpụrụ okwukwe ndịozi, yana omume edere (*ma ọ bụ jikọtara ya na nkuzi), (ma ọ bụ Didache) na Justin. Ndị ndu Ndị Kraịst nke narị afọ nke atọ jigidere ụdị nke mbụ, na, ma ọ dịkarịa ala na Rome, baptizim n'aha Kraịst weere na ọ dị irè, ma ọ bụrụ na ọ bụ oge adịghị mma, n'ezie site n'oge Bishọp Stephen (254-257). "
Ebe oche nke ikike dị n'okpukpe, James Martineau, 1905, peji 568
“Ihe ndekọ ahụ nke na -agwa anyị na n'ikpeazụ, mgbe mbilite n'ọnwụ ya gasịrị, o nyere ndị ozi ya ọrụ ka ha gaa mee baptizim n'etiti mba niile (Mt 28:19) raara onwe ya nye site n'ikwu n'asụsụ Atọ n'Ime Otu nke narị afọ na -esote, ma na -amanye anyị. lee n'ime ya onye nchịkọta akụkọ ụka, ọ bụghị onye nkwusa ozioma, ma ya fọdụkwa onye guzobere ya n'onwe ya. Ọ nweghị akụkọ ihe mere eme pụtara na usoro baptism a na mbụ na “nkuzi nke ndị ozi iri na abụọ” (ch. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, ed. Philip Schaff, 1887), na Apology mbụ nke Justin (Apol. I. 61.) ihe dị ka etiti narị afọ nke abụọ: na ihe karịrị otu narị afọ ka e mesịrị, Saịprọs hụrụ na ọ dị mkpa ịrapara n'iji ya eme ihe karịa ahịrịokwu ochie ahụ emere baptizim '' n'ime Kraịst Jizọs, '' ma ọ bụ banye '' aha Onyenwe anyị Jizọs. . ” . “Jupụtara na Mụọ Nsọ;” na n’ezie e mere ya baptizim “n’ime Kraịst Jizọs.” . dị ka onye mba ọzọ, ọ gaghịkwa enye gị nkwanye ugwu nke Ndị Kraịst na ndụ gị, ma ọ bụ olili ozu Ndị Kraịst n'ọnwụ gị. Ọ bụ iwu nke ga -akatọ ime baptism ọ bụla edere edere nke onyeozi mere; n'ihi na ọ bụrụ na enwere ike ịtụkwasị akwụkwọ Ọrụ Ndịozi obi, ojiji a na -anaghị agbanwe agbanwe bụ baptizim "n'aha Kraịst Jizọs," (Ọrụ 3:27) ọ bụghị "n'aha nke nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ. . ”
Peake’s Commentary on the Bible, 1929, peeji nke 723
Matiu 28:19, “Ụka nke ụbọchị mbụ emeghị iwu a zuru ụwa ọnụ, ọbụlagodi na ha maara ya. Iwu nke ime baptizim n'aha nke nwere okpukpu atọ bụ mmụba nkuzi. N'ọnọdụ okwu “na -eme baptizim… Mmụọ” anyị nwere ike gụọ naanị "n'aha m,"
Edmund Schlink, Ozizi Baptizim, peeji nke 28
“Iwu baptism n'ụdị ya nke Matiu 28:19 enweghị ike ịbụ mmalite nke baptizim Ndị Kraịst. Ma ọ dịghị ihe ọzọ, a ghaghị iche na e bufewo akụkụ Akwụkwọ Nsọ n'ụdị nke chọọchị [Katọlik] gbasaa. ”
Akụkọ banyere Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, peji nke 79
”Baptizim n’oge ndị ozi bụ n’aha Onyenwe anyị Jizọs (1 Kọr. 1:13; Ọrụ 19: 5). Anyị enweghị ike ịchọpụta mgbe usoro ahụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ pụtara ”
Catechism nke Bible, Rev. John C Kersten, SVD, Catholic Publishing Co., NY, NY; l973, p. 164
“N'ime Kraịst. Akwụkwọ Nsọ na -agwa anyị na emere Ndị Kraịst baptizim n'ime Kraịst (nr. 6). Ha bụ nke Kraịst. Ọrụ Ndịozi (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) na -agwa anyị maka ime baptizim “n'aha (onye) Jizọs.” - ntụgharị ka mma ga-abụ "n'aha (onye) Jizọs." Naanị na narị afọ nke anọ ka usoro “n'aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ” ghọrọ omenala.
Didache tụgharịrị. Didakhé pụtara “Nkuzi” a makwaara ya dị ka nkuzi Onyenwe anyị site n'aka ndị ozi iri na abụọ nye mba dị iche iche
Amabeghị ụbọchị ọrụ mbụ ya, onye dere ya na ntọala ya n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọkà mmụta ọgbara ọhụrụ malitere na narị afọ mbụ (90-120 AD)
Onye isi akaebe nke ederede Didache bụ ihe odide parchment Greek nke narị afọ nke iri na otu a maara dị ka Codex Hierosolymitanus ma ọ bụ Codex H, (1056 AD)
O yikarịrị ka emezigharị Didache n'ihe dị ka afọ 950 site na mgbe ọ malitere ma e jiri ya tụnyere Codex H
Didache gbachiri nkịtị na nchegharị na ọnwụ ihe atụ n'ime Kraịst
Didache 7 na -ekwu, “mana gbasara baptizim, otu a ka ị ga -esi mee baptizim. N'iburu ụzọ gụọ ihe ndị a niile, mee baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ na mmiri dị ndụ (na -agba agba). Ma ọ bụrụ na ị nweghị mmiri na -enye ndụ, mee ya baptizim na mmiri ọzọ; ọ bụrụkwa na ịnweghị ike ịjụ oyi mgbe ahụ kpoo ọkụ. Ma ọ bụrụ na ịnweghị, wụsa mmiri n'isi ya ugboro atọ (ugboro atọ) n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. ”
Ihe akaebe nke ime na -arụtụ aka na Didache 7 dị ka ntụgharị okwu, ma ọ bụ mgbakwunye ọzọ. Na Didache 9, nke na -ekwu maka oriri nsọ, onye edemede kwuru, "Mana ka onye ọ bụla ghara iri ma ọ bụ drinkụọ ekele ekele a, ma ọ bụghị ndị nọworo. baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs"(Ihe odide Grik na -ekwu" Iesous "nke bụ Grik maka Jizọs)
N'oge na -adịghị anya ka ekwesịrị ime baptizim n'aha Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, Didache kwuru oke mkpa ime baptizim n'aha Onyenwe anyị Jizọs (ya bụ, “Iesous” - otu okwu Grik ahụ dị na Ọrụ 2:38. (Ọrụ 8: 16; Ọrụ 10: 48; Ọrụ 19: 5) Tya na -anọchite anya mgbagha doro anya ma na -enye nkwado maka arụmụka na Didache 7 bụ ntụgharị.
Agbanyeghị na enwere ụfọdụ ihe na -atọ ụtọ n'ime Didache nke ọ ga -abụ na edere ya na mbido narị afọ nke abụọ, o doro anya na njikọta na mbipụta nke Didache mechara kpatara enweghị mgbagwoju anya banyere eziokwu nke ọdịnaya ya.
John S. Kloppenborg Verbin, na-egwupụta Q, p. 134-135
"The Didache, mmalite narị afọ nke abụọ nke Ndị Kraịst, bụkwa ihe mejupụtara nke ọma, nwere akụkụ" Ụzọ abụọ "(isi 1-6), akwụkwọ ntuziaka (7-10), ntuziaka maka nnabata ndị amụma na-ejegharị ejegharị ( 11-15), na mkpirikpi oge (16). Mụdịdị dị iche iche dị n'ụdị na ọdịnaya yana ọnụnọ nke enweghị mgbagha na nke doro anya, na -eme ka o doo anya na ebipụghị Didache na akwa niile. Echiche kacha taa bụ na edepụtara akwụkwọ ahụ dabere na ọtụtụ nnwere onwe, preredactional nkeji nke otu ma ọ bụ abụọ rụpụtara.s (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Nkọwa nke ngalaba “ụzọ abụọ” na ọtụtụ akwụkwọ “ụzọ abụọ” na-egosi na Didache 1-6 bụ nsonaazụ nke ndezi ọtụtụ ihe. Akwụkwọ a bidoro site na nhazi ihe egwu (ihe dị ka Barnabas 18-20), mana ahazigharịrị ya na isi mmalite nke Didache, Doctrina apostolorum, na Iwu Ụka Apostolic… ”
Johannes Quasten, Patrology Mpịakọta. 1, Peeji nke 36
Quasten dere na edeghị Didache n'oge ndịozi mbụ nọ:etinyere akwụkwọ ahụ site na ntinye ndị ọzọ... akwụkwọ ahụ alaghachighị n'oge ndịozi . Nkọwa sara mbara na -egosi na oge ndịozi abụghịzi ihe dịkọrọ ndụ, kama ọ banyela n'akụkọ ihe mere eme. ”
Akụkọ Eusebius 3:25
Na mmalite narị afọ nke anọ, Eusebius nke Sesaria dere na “… ihe a na-akpọ Ozizi Ndị Ozi…. "